नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले र माओवादीबीचको आरोप प्रत्यारोप छताछुल्ल भएको छ । यसबाहेक कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने माओवादी कदमले एमालेलाई निकै ठूलो झड्का महसुस गराएको छ । यसको असर र संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि एमालेको रोडम्याप के हुन्छ ? यसै विषयमा नेकपा (एमाले)का सचिव प्रदिप ज्ञवालीसँग रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु सट्टा संसद् ‘फेस’ गर्छु किन भन्नुभएको ?
माओवादी केन्द्रले के भन्दै छ भने एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झुट र झुटमात्रै बोल्दै हुनुहुन्छ । उनका आफ्ना मानवअधिकारकर्मी, उनका वकिल र नेताहरूले जनयुद्धकालीन मुद्दादेखि लिएर अरू धेरै कुरालाई नियोजित रूपमै उठाइरहेको आरोप उनीहरुको छ । वैशाख २३ गते जुन सहमति भयो नौबुँदे । त्यो सहमति हुने दिन तीन बुँदाको एउटा कागज आएको थियो । जुन कागजको पहिलो बुँदामा– बजेट पास भइसकेपछि केपी ओलीले राजीनामा दिने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने तथा त्यस सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने । दोस्रो बुँदामा– भावी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने । र, तेस्रो बुँदामा– पार्टी एकताको दिशामा तयारी गरेर अगाडि जाने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । पहिलो बुँदा नै अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भनेको शब्द नै के हो भने– बूढाबूढीले भन्छन् नि नाति बिहे गर न मलाई पनातिको मुख हेरेर मर्न मन छ । या चौरासी गरेर मर्न मन छ भनेजस्तै मलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरेर बिदा हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुनै इच्छा छैन । हामी एउटा मिसनमा छौँ, त्यो मिसनमा सहमति हुन्छ भने धेरै कुरामा मिलेर जान सकिन्छ । मिसनमा असहमति हो भने मलाई समय तोकेर म्यादी प्रधानमन्त्री हुन मन छैन । उहाँले त्यो पहिलो बुँदालाई ‘आउट राइट रिजेक्ट’ गर्नुभयो । प्रचण्डले अहिले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन तर उहाँले त्यसै दिन भन्नुभएको थियो, ‘मैले त भनेकै थिएँ नि साथीहरूलाई यस्तो कागज नल्याउनुस् है । मैले चिनेको केपी ओली कागज गरेर प्रधानमन्त्री हुने मान्छे होइन । यस्ता कागजमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्न । उहाँ आफ्नैखालको स्वभाव भएको मान्छे हो ।’ भनेपछि त्यो कुराको त्यही अन्त्य भयो र हामीले नौबुँदे सहमति ग¥यौँ ।
भनेपछि त्यही दिनदेखि नै प्रधानमन्त्रीसहित तपाईंंहरूलाई प्रचण्डले देखाइदिन्छौँ भन्ने लाग्न थाल्यो होइन त ? देखाइदिन त के देखाइदिन छ र ? देखाइदिने त अहिले प्रचण्ड नै हुनुभएको छ । अथवा उहाँले नै के देख्नुहुन्छ । किनभने हरेक महत्वपूर्ण घटनाको उहाँले पश्चाताप गर्नुभएकै छ । गिरिजालाई राष्ट्रपति नबनाएर गल्ती गरेँ, कटुवाललाई हटाएर गल्ती गरेँ । खिलराजलाई चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर गल्ती गरेँ । लोकमानलाई ल्याएर गल्ती गरेँ । यो पनि त्यसैको ‘सिरिज’ न हो । कहिलेमात्रै हो भन्ने हो । इतिहासमा उहाँले गर्नुभएको यो गल्तीको प्रश्चाताप गर्नुपर्नेछ र यो धेरै महँगो पर्नेछ । अर्को कुरा सत्तारूढ दलबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति भनेको छ, जसको संयोजक स्वयम् प्रचण्ड हुनुहुन्छ । समस्या उत्पन्न भएपछि कतिपटक त्यसको बैठक बस्यो ? कतिपटक बैठक डाक्नुभयो ? त्यसै बैठकमा बसेर समाधान खोज्नुभयो कि शेरबहादुरसँग गएर शान्तिप्रक्रियाका दुई हिस्सेदार हामीलाई तान्यो भने तपार्इंलाई पनि तान्छ, मलाई पनि तान्छ । यो एमालेलाई मतलबै छैन । त्यसैले हामी मिलेपछि समस्या समाधान हुन्छ भनेर त्यता जानुभयो । जब कि उहाँले त्यो संयन्त्र प्रयोग गर्नुपथ्र्याे । संयन्त्रबाट उहाँले निर्णय गराउनुपथ्र्याे ।
नाकाबन्दी हटेको ओली सरकारको पहलले कि मोदी आफैँ विवादमा तानिएर ? यो सरकारले नहटाए कुन प्रभुले हटाएको त ? तपार्इंको कुरा बेकारको र गतल हो । भारतले त नसकेर हो नि ।
आज राष्ट्रवादको नारा घोक्दा रमाइलो मान्ने एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीको राष्ट्रवाद महाकालि सन्धि गर्दा कहाँ थियो भन्ने प्रश्न गर्नेहरु पनि छन् ? यो बीचमा एमालेलाई के भयो कि अचानक राष्ट्रवादको नारा घन्काउन थाल्यो ? यो ‘यु टर्न’ कसरी ? पहिलो कुरा यदि महाकाली सन्धि गलत नै रहेछ भने पनि (भलै त्यसबारे मेरा छुट्टै मान्यता छन्) के मान्छेले गल्ती सच्याउन पाउँदैन ? यदि त्यसो हो भने त माओवादीलाई विश्वासै गर्न भएन । उसको नेतृत्वमा, आह्वानमा भएको आन्दोलनमा १७ हजार मान्छे मारिएका हुन् भनेर शान्तिप्रक्रियालाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर विश्वासै नगर्ने ? त्यसैकारणले वस्तुलाई गतिशीलतामा हेर्नुपर्छ । भनेको ‘टेस्ट’ गर्ने हो नि त । जतिबेला महाकाली सन्धि भएको थियो, त्यसबेला उहाँ पार्टीको कुनै पनि निर्णायक ठाउँमा हुनुहुन्नथ्यो । आज पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कसैलाई पनि परीक्षण गर्ने भनेको त उसले गरेको कामलाई हेरेर होला ।
होलान् ? या पार्टीले खटाएर गएकै हुन् ? मैले तपाईंलाई एमाले गणको फोटो देखाऊँ ? होलान् म त्यहाँ गएको थिइनँ । तर, तपाईंले भनेपछि मैले विश्वास गरेँ । तपाईंले भनेपछि म विश्वास गर्छु । गएका पनि होलान् । गएका थिए । तर, थिए नै भन्नका लागि म त्यहाँ थिइनँ । तर, एउटा कुरा विश्वास गर्नुस् नरेशजी, केपी ओली आइसकेपछि एउटा गैरराजनीतिक पंक्ति जसको राजनीतिप्रति कुनै रुचि थिएन, उसमा राष्ट्रिय चेतना आएकै हो, जसले समाजलाई तरंगित गर्यो । अनि विकासका सपना जुन एकप्रकारले हामीले देख्नै बिर्सिएका थियाँै, त्यो सपना देख्न थाल्यौँ । भलै त्यसलाई बढाइ–चढाइ र तोडमरोड गरियो । कुनै दिन हामी काठमाडौँवासीको घर–घरमा ग्यासका पाइपलाइन जोड्नेछाँै भन्दा मानौँ यो त बिल्कुल असम्भव कुरा गरेजस्तो गरी प्रधानमन्त्रीको धूलो काढियो । हाम्रौ बौद्धिक चेतनाको स्तर हेर्दा दुःख पनि लाग्यो ।
जनता स्वतः उत्रिनु र सत्ता टिकाउन स्वतन्त्रका नाम कार्यकर्ता खटाउने कुरा तपाईंलाई सहज र एउटैजस्तो लाग्छ है ? मैले अघि नै जवाफ दिएँ– सरकार बन्ने र विघटन हुने संसद्बाट हो । अहिले केपी ओलीका पक्षमा तपाईंले १० लाख मान्छे निस्के पनि फैसला गर्ने संसद्ले हो । हामीलाई कुनै भ्रम छैन तर केपी ओली संसद्को एउटा गलत निर्णयले गएछन् भने पनि त्यो गलत भयो भनेर जनता सडकमा उत्रन नपाउने ? अर्को कुरा तपाईंले जे भनिरहनुभएको छ– उतार्ने भनेर यहीँनेर गलत छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सपना देख्न सिकाए भन्ने सन्दर्भमा मलाई पीताम्बर शर्माको भनाइ सम्झना आइरहेको छ । उहाँले भन्नुभएको थियो– प्रधानमन्त्रीलाई सपना देख्ने अधिकार छ तर नेपालीको वर्तमान अवस्थालाई व्यंग्य गरेर होइन । प्रधानमन्त्रीले सपनाको कुरा गरेर हावामा गफ दिने र तपाईंहरू त्यसमा सही थाप्ने गरेजस्तो लाग्दैन ? मैले माथि पनि भने यसबीचमा नेपालले आफ्नो सपना देख्न बिर्सिएको रहेछ । माओवादीले एउटा सपना देखायो र युवालाई बन्दुक बोकायो । म एकैछिनमा मारिन सक्छु, म मारिँदा मलाई गाड्ने समय पनि मेरा साथीहरूलाई हुँदैन भनेर आफ्ना निम्ति आफैँ खाडल खनेर जानेसम्मको एउटा मोटिभेसन गर्यो । तर, ती सबै कुरा भताभुंग भइसकेपछि र अर्को एउटा सपना जागेको थियो दोस्रो जनआन्दोलनको समयमा । तर, पछि पट्यारलाग्दो संक्रमणकालले हाम्रा सबै सपनालाई अपहरित गर्यो । वास्तवमा हामी अहिले सपनाविहीन मानिसजस्ता भएका छाँै । अवतारसिंह पासको एउटा कविता छ– बिहान उठेर जागिर जानु र जागिरबाट घर आउनु र चुपचाप घरमा सुत्नु सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ सपनाहरूको मृत्यु हुनु भनेजस्तो हामी ठ्याक्कै त्यही जागिर भनसुन अलिक राम्रा मान्छे अमेरिका, अलिक कमसल मान्छे खाडी मलेसियाभन्दा बढी हामीले सपना नै देख्न सकेका छैनौँ ।
ओली सरकार ढाल्न भारत सक्रिय भयो भन्दै गर्दा तपाईंहरूले देख्नुभएको के हो ? यसमा म कसैलाई दोष लगाउन चाहन्न । आफ्नो थैली ह्वाङग भएपछि जो कसैले पनि हात हाल्छ । जो साथीसँग साथ फेरा लगाएर जुनी–जुनी भनिएको थियो, त्यो कम्तीमा पनि संविधान कार्यान्वयनसम्म सँगै जान्छ होला भन्ने सोचेका थियौँ । उही साथी उही सहयात्रीले छापामार शैलीमा अचानक झुक्काएर प्रतिपक्षीसँग सरकार बनाएर ढाल्न लागेपछि अरूलाई केको दोष ।